फागु पूर्णिमा (होली) र यसको महत्व
फागु पूर्णिमा (होली) र यसको महत्व । फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु अर्थात् होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने परम्परा छ । केही वर्ष अघिसम्म उपत्यकामा उत्ताउलो रूपमा […]
कहाँ छ महिला अधिकार लागू भएको ब्यबहारमा ?
कहाँ छ महिला अधिकार लागू भएको ब्यबहारमा ? दुईवटा महिलाले एकजना पुरूषसंग विवाह गर्दा कानुन लाग्छ भने कसरी महिला अधिकार भयो ? महिलालाई आज दिनप्रति दिन बलात्कार भएका सयकडौं होइन हजारौं घटना देखिएको छ । एउटा महिलाले अर्को महिलाको उपेक्षा गरेको देखिन्छ । एउटा महिलालाई पर्यो भने अर्को महिलाले महिलालाई नै दोष लगाउने परिपाटी हावी […]
महिला अधिकार र नेपालको अवस्था
महिला अधिकार र नेपालको अवस्था । महिलाले आफ्नो जीवनको निर्णय आफै गर्ने अधिकार पाउनु पर्दछ । तर नेपाली महिलाहरुको भने नेतृत्व बिकास हुन सकेको छैन । नेपाली समुदायमा महिलाहरुको संख्या झन्डै पुरुष सरह नै देखिएतापनि समाजको नीति निर्माण क्रियाकलापहरुमा महिलाहरुको संख्या अति नै न्यूनतम रहेको देखिएको छ । जसले गर्दा महिला बर्ग ओझेलमा परिरहेका छन […]
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र नेपालमा महिला सशक्तिकरण
आज ११० औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, ‘समानताको पुस्ताः अन्त्य गरौं हिंसा विभेद र असमानता’ भन्ने मूल नाराका साथ बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईदैछ । नेपाली महिलाले पनि आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको आन्दोलनसँग जोडेर यो दिवस मनाउने गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ११०औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीमा सुख, शान्ति र […]
नेपालका राष्ट्रिय विभुति राजा जनक र उनको योगदान
नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरू नेपाललाई विश्व सामु चिनाउने व्यक्तित्वहरू हुन् । जनक नेपालका राष्ट्रिय विभूति हुन् । जनकको वास्तविक नाम शिरध्वज हो । राजा जनक प्राचीन राज्य मिथिलाका ऐतिहासिक राजा थिए । यिनको राजधानी हालको नेपालमा पर्ने जनकपुर शहर थियो भन्ने विश्वास छ । पौराणिक मान्यता अनुसार राजा जनक भगवान श्रीरामकी पत्नी सीताका पिता थिए । […]
जाजरकोट, १९ फागुन । “बाबा म अहिले गर्भमा हुर्किरहेको छु, हजुरले आमालाई पोसिलो खाने कुरा उपलब्ध गराउनुहोला ? आमाले सो खाएमा म र आमाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । म जन्मिसकेपछि नियमित तौल लिनु, खोपहरुसमेत लगाउनुहोला, म स्वास्थ भएँ भने देशका लागि योगदान गर्न सक्छु । म हुर्कँदै गर्दा आमालाई कुनै खालको तनाव र अभाव हुन […]
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भनेको के हो ? मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) २००४ मा स्थापना गरिएको अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । हालसम्म ४९ देशलाई एमसीसीले अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यसको खास उद्धेश्य भनेको कमजोर देशलाई आर्थिक स्तर उकास्न रहेको देखिन्छ । अल्बानिया, आर्मेनिया, जर्जिया जस्ता युरोपेली देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरु घाना, केन्या, लाइबेरियामा […]
नेपालको नामकरण र यसको संक्षिप्त जानकारी
नेपाललाई विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणहरूमा अत्यन्तै प्राचीन भूमिको रूपमा वर्णन् गरिएको छ । पश्चिम नेपालको वुटवल क्षेत्रमा पाइएको रामपिथेस मानवको अवशेषले करीव एक करोड वर्ष भन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा मानवको वसोवास शुरु भईसकेको तथ्य प्रष्ट हुन्छ । नेपाललाई सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोवन र द्वापरयुगमा मुक्तिसोपान् भनिन्थ्यो भने कलियुगमा नेपाल भन्ने गरिएको कुरा हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरूमा […]
परिवर्तन त भएकै छ, कसले भन्दैछ भएन परिवर्तन ! हिजो र आजमा धेरै परिवर्तन भएको छ । हिजोका राजसंस्थाका पालामा सत्तासिनहरू आज पनि छन्, भोली पनि रहनेछन् । हिजो धर्म निरपेक्षता थिएन आज छ । हिजो धर्म परिवर्तन गर्नेलाई कारवाही हुन्थ्यो आज हुदैन । हिजो घुस लिने र दिने राष्ट्का अपराधी हुन भन्थे तर अहिले ठिक […]
हिन्दुहरुको प्रमुख चाड महाशिवरात्रि अथवा शिवरात्री पनि हो । विशेषगरी यो भगवानशिवको प्रमुख पर्व हो । शिवजी उत्पत्ति हुनुभएको रातका नामवाट नामकरण भएको यो पर्व कालरात्रि मोहरात्रि सुखरात्रि र शिवरात्रि नामक चार प्रमुख रात्रिमध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा पुराणहरूमा वर्णित छ । फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यस पर्वलाई सम्पूर्ण दीनदुःखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीहरूको हृदयमा धर्मको […]
प्रजातन्त्र दिवस किन मनाइन्छ ?
नेपालमा २००७ फागुन ७ गते अर्थात् आजको दिन तत्कालिन जहानिया राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएको सम्झनामा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी ७० औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदैछ । विशेष गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्षमा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गङ्गालाल श्रेष्ठले विसं १९९७ माघमा बलिदानी दिएका थिए । प्रजा परिषद नामक […]
सच्चा देशभक्त साहसी युवा राजनेता माग्दैछ यो देशको माटोले, अव जाग युवा जाग
सच्चा देशभक्त साहसी युवा राजनेता माग्दैछ यो देशको माटोले, अव जाग युवा जाग, नामर्द नबन यो देश बनाउनु छ तिमीले ! कुनै पनि राष्ट्र वा समाजको विकासमा युवा पिढीको खाँचो हुन्छ । युवाहरुको आचरण, उनीहरको विचार, सोच्ने तरिका, कार्यशैली, उच्च शिक्षा हासिल आदि कुराले युवाहरुको विकास संगसंगै देशको विकास पनि त्यसैमा भर पर्दछ र जोडिएको […]
प्रेम के हो ? सच्चा प्रेम के लाई भनिन्छ ? प्रेम दुई आत्माको पवित्र मिलनलाई भन्दछन् । प्रेम गर्नु अपराध होइन तर प्रेम गरेर धोका दिनु पाप हो, अपराध हो । हुन त प्रेमको आयमिक अर्थ र महत्व छ । आमा बाबाले सन्तानलाई गर्ने माया र भाईले बहिनीलाई गर्ने माया, नातागोताले गर्ने माया सवै प्रेम […]
आज प्रणय दिवसको दिन प्रेम साट्न रानीमहलमा व्यस्त !
आज प्रणय दिवस, युवायुवतीले विशेष दिनका रुपमा लिने गर्दछन् । पश्चिमा संस्कृतिका रूपमा लिइएको यो दिवस पछिल्लो समय नेपालमा पनि विशेष उत्सवकै रुपमा लिने गरिएको छ । प्रणय दिवसमा गुलाबको फूल तथा अन्य विभिन्न उपहार दिएर आफूलाई मन पर्ने अर्थात् माया गर्ने मान्छेलाई खुशी पार्ने र रमाइला ठाउँहरु घुम्ने चलन छ । प्रेमभाव व्यक्त गर्न […]
प्रेम दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे प्रेम जोडीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ । जोडी खोज्दै गरेका तथा प्रेम प्रस्ताव राख्ने मनसाय बनाएकाहरूका लागि पनि प्रणय दिवस उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । विशेष गरी यो १४ फेब्रुअरीका दिन यो दिवस मनाइने गरिन्छ । भ्यालेन्टाइन डे आफैँमा एक रोमान्टिक र प्रेममय दिन हो । प्रेम अक्सीजन जतिकै हो । […]
लागूऔषधको रूपमा परिचित गाजाका अनगिन्ती फाइदाहरू । गाजालाई लागूऔषधको रूपमा लिइने भएतापनि यसले मानवीय क्षति भने गरेको नदेखेको हुनाले आज यसको महत्व धेरै बढ्दै गएको देखिन थालेको छ । अहिले अमेरिका तथा युरोपका शहरमा गाजा खुला गरिएको छ । अन्य देशहरूले पनि गाजा सम्बन्धी नियम खुकुलो बनाउँदे गएका छन् । यसको ठोस कारण हो यसका […]
आज मैले नेपालमा जडिबुटीको वर्तमान अवस्था विषयमा नागरिकलाई जानकारी पस्कने काममा जुट्नेछु । नेपालमा थुप्रै प्रजातिका जडीबुटी औषधिका रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । वनस्पति विभागले ७००० प्रजातिका वनस्पति जडीबुटी औषधिका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बताएको छ । औषधिका रुपमा प्रयोग हुने जडीबुटीमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णाली क्षेत्रमा जडीबुटी उत्पादन हुने गरेको र सबैभन्दा कम पश्चिमाञ्चल […]
नेपाल चाहेमा स्विट्जरल्याण्ड बन्न सक्छ, तर गफ होइन काम गरौ । यस विषयमा गहन अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने यहाँ बहुमुल्य औषधि छन् तर उपयोग विहिन छन् । यस्ता औषधि प्रयोग गरेर हामीले देशलाई अग्रपंक्तिमा राख्न सक्छौं । हाम्रो देशमा यस्ता औषधि छन् जसको प्रयोग गरेर युवालाई लागु […]
उस्तै मुद्दा लागेका केहि सांसद हिरासतमा, सापकोटा सभामुखको कुर्सीमा
नेपाली राजनीतिमा यतिसम्म हुन्छ की जुन सुन्दा, हेर्दा अचम्म नै लाग्छ । कतिसम्म भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै सभामुख, मन्त्री बन्छन् । त्यहि घटना अहिले हेर्न सकिन्छ नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटालाई ! सापकोटाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थिए भने कुनै मुद्दा जब नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै दायर भएको छ । त्यहि मुद्दा हुँदाहुँदै प्रतिपक्ष […]